တစုံတယောကျကို ရညျရှယျပီး ပရိသတျကွီး စိတျဝငျစား အောငျတငျလာပွနျတဲ့ကွျောငွာဘုရငျမထကျထကျမိုး ဦး – XB Media & News
တစုံတယောကျကို ရညျရှယျကာ စာလေးတကွောငျးရေးတငျလာပွနျတဲ့ ကွျောငွာဘုရငျမ ထကျထကျမိုးဦး…
အကယျဒမီမငျးသမီးခြော ထကျထကျမိုးဦးကတော့ အနုပညာလမျးကွောငျးတဈလြှောကျမှာ အောငျမွငျမှုတဈနရောကို အရယူထားနိုငျခဲ့သူ ဖွဈပါတယျ။ သူမက တဈခြိနျကကွောငွာဘုရငျမလို့တောငျတငျစားရတဲ့အထိအောငျမွငျခဲ့တဲ့မငျးသမီးကွီးထကျထကျ
မိုးဦးကတော့ကိုဗဈကာလမှာတနျဖိုးကွီးပစ်စညျးတှကေိုlive လှငျ့ပွီးရောငျးခရြာမှာစံခြိနျတငျရောငျးခနြိုငျခဲ့သူတဈယောကျဖွဈပါ တယျ။ထကျ ထကျကတော့ အာဏာသိမျးပွီးနောကျပိုငျးမှာလူထုလှုပျရှားမှုမှာမပါဝငျခဲ့ဘဲအခြိနျအတျောကွာပြောကျနခေဲ့တာဘဲဖွဈပါ
တယျ။မကွာခဏဆိုသလို ထကျထကျက တောရှာလေးမှာ တရားအားထုတျရငျးဥပုတျစောငျ့နတေယျဆိုတဲ့ ပုံလေးတှကေိုလညျး တငျပေးလာ ပါသေးတယျနျော.. .. .ထကျထကျကတော့ ခုခြိနျမှာတော့ကိုယျပိုငျရတနာဆိုငျဖှငျ့ပွီးတော့ကိုရောငျးခဖြို့ပွငျဆငျနတော ဖွဈ
ပါတယျနျော.. ဒီနလေ့ေးမှာတော့ ထကျထကျက Instagram မှာ ” မငျးဖို့ မငျးဖို့ ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့အတူ ပရိသတျကွီးကို စိတျဝငျစား အောငျ လုပျခဲ့ပါသေးတယျနျော. ထကျထကျ ရေးသားလာတဲ့ စာလေးကတော့ ဘာအဓိပ်ပါယျနဲ့ ဘယျသူ့အတှကျမြားရညျညှနျးထားလဲဆိုတာ ထကျထကျကို ခဈြကွတဲ့ ပရိသတျကွီးလညျး ခနျ့မှနျးပေးကွပါအုံးနျော…
တစုံတယောက်ကို ရည်ရွယ်ကာ စာလေးတကြောင်းရေးတင်လာပြန်တဲ့ ကြော်ငြာဘုရင်မ ထက်ထက်မိုးဦး…
အကယ်ဒမီမင်းသမီးချော ထက်ထက်မိုးဦးကတော့ အနုပညာလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာ အောင်မြင်မှုတစ်နေရာကို အရယူထားနိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမက တစ်ချိန်ကကြောငြာဘုရင်မလို့တောင်တင်စားရတဲ့အထိအောင်မြင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီြး ကီးထက်ထက်
မိုးဦးကတော့ကိုဗစ်ကာလမှာတန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေကိုlive လွှင့်ပြီးရောင်းချရာမှာစံချိန်တင်ရောင်းချနိုင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါ တယ်။ထက် ထက်ကတော့ အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာလူထုလှုပ်ရှားမှုမှာမပါဝင်ခဲ့ဘဲအချိန်အတော်ကြာပျောက်နေခဲ့တာဘဲဖြစ်ပါ
တယ်။မကြာခဏဆိုသလို ထက်ထက်က တောရွာလေးမှာ တရားအားထုတ်ရင်းဥပုတ်စောင့်နေတယ်ဆိုတဲ့ ပုံလေးတွေ ကိုလည်း တင်ပေးလာ ပါသေးတယ်နော်.. .. .ထက်ထက်ကတော့ ခုချိန်မှာတော့ကိုယ်ပိုင်ရတနာဆို င်ဖွင့်ပြီးတော့ကိုရော င်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတာ ဖြစ်
ပါတယ်နော်.. ဒီနေ့လေးမှာတော့ ထက်ထက်က Instagram မှာ ” မင်းဖို့ မင်းဖို့ ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့အတူ ပရိသတ်ကြီးကို စိတ်ဝင်စား အောင် လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်နော်. ထက်ထက် ရေးသားလာတဲ့ စာလေးကတော့ ဘာအဓိပ္ပါယ်နဲ့ ဘယ်သူ့အတွက်များရည်ညွန်းထားလဲဆိုတာ ထက်ထက်ကို ချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ခန့်မှန်းပေးကြပါအုံးနော်…